NLD ပါတီ CEC ဦးဝင်းတင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေးကို သပိတ်မှောက်ပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအခြအနေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသလို၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာရမယ်လို့ပြောရခြင်း ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မသမာမှု၊ မတရားမှု တွေရှိခဲ့ရင် ဒီအချက်တွေကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ သိအောင် ဖေါ်ထုတ်နိုင်မှာမို့လို့ ဦးဝင်းတင် က ဘီဘီစီကို ရှင်းပြပါတယ်။ သပိတ်မှောက်ခြင်းဟာလဲ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပုံ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ အရွေးခံမယ့်သူ ရှိသလို မဲပေးမဲ့သူလဲရှိတဲ့အတွက်၊ ဒါကိုတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဘောသက် ရောက်တဲ့အကြာင်း၊ အဲဒီအတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ အထမမြောက်နိုင်တဲ့သဘောရှိတဲ့ အကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူ ၁ဝဝ မဲထည့်ရမယ့်အစား၊ တစ်ဦး နှစ်ဦးပဲ မဲထည့်ကြရင်၊ ဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထမမြောက်တဲ့အတွက်၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်တယ်လို့ ယူဆရင် ရူးနှမ်းရာရောက်လို့ နိုင်ငံတကာဖက်ကလဲ အရူးလုပ်ခံ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖျားတာကို တော့ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:14 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး လက်စွဲစာအုပ်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:47 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး(၉)နှစ်ပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား(တိုကျို)
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ(၃၀)ရက်။
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး (၉)နှစ်ပြည့်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဋ္ဌာနခွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ တိုကျိုမြို့ရှီနာဂါဝါ အရပ်ရှိ မြန်မာစစ်အခွန်ရုံး(သံရုံး)ရှေ့တွင် ယနေ့မေလ (၃၀)ရက် နေ့ နေ့လည် ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၃၀ရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူရဦးတင်ဦးတို့၏ မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်း စည်းရုံးရေးခရီးစဉ် ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ကျည်ရွာအနီးတွင် စနစ်တကျ ချုံခိုတိုက်ခိုက်သည့် နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီးကို ကျုးလွန်ခံခဲ့ကြပါသည်။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူရဦးတင်ဦးတို့၏ အသက်ကို ကာကွယ်ရင်း အသက်ပေး စွန့်လှုခဲ့ကြသည့် သူများအတွက် ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လစဉ် (၃၀)ရက်နေ့ ကျရောက်တိုင်း ဂျပန်နိူင်ငံတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုတွင် ပါဝင်ကျုးလွန်ခဲ့ကြသည့် သူများကိုလည်း ယနေ့အထိ တစုံတရာအရေးယူ
ရန်နှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင် အကောင်အထည်ဖော်ပေးရန် တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဂျပန်နိူင်ငံရောက် အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိ သူများ မြန်မာနိူင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ စုစုပေါင်း (၁၂၀)ကျော် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:56 PM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဘဘဦးတင်ဦး ဧရာဝတီတိုင်း ခရီးစဉ် စတင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးဟာ ဧရာဝတီတိုင်း နယ်လှည့်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ဒီနေ့ ပုသိမ်မြို့ကို ရောက်ရှိနေ ပါတယ်။ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်လာပြီး နောက်ပိုင်း ဒါဟာ ဦးတင်ဦးအနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် နယ်လှည့်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ရွှေဂုံတိုင်ဌာနချုပ်ရုံးသို့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာစဉ်။ (Photo: RFA)
ဒီနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ပုသိမ်မြို့ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဦးတင်ဦးဟာ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအဝင် မြို့ခံ အယောက် ၂ ရာနီးပါးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ ဆက်လက်ပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားကြမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ ပုသိမ်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ စည်းရုံးရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ NLD ပါတီရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလို၊ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းနဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း တိုင်ပင် ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း ခရီးစဉ်အတွင်း နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့ မြို့နယ်တွေကိုလည်း သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း လေးရက် ကြာမြင့်မယ်လို့ ဦးတင်ဦးက ပြောပါတယ်။ သတင်း။။RFA
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:13 PM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တော်လှန်သူတို့ ကြွေးကြော်သံ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ကရင်နီတပ်မတော်၏ အမာခံ တပ်စခန်းတခုဖြစ်သည့် ညာမိုတပ်စခန်းဆီကိုရာနှင့်ချီသည့် လူအုပ်စုက ရထားတွဲကြီးသဖွယ် စီတန်းလမ်းလျှောက် နေကြသည်။ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေပေါင်းသုံးထောင်ကျော်မြင့်သည့် နယ်စပ်တောင်တန်းပေါ်မှ ဖြတ်လျှောက် လာခဲ့သည့် ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် လူသွားလမ်းရှိရာ အနောက်ဖက်ကို တမင်လည်ပြန် ကြည့်လိုက်ပါက လွမ်းမောဖွယ်ကောင်းလှသည့် စိမ်းလန်းသည့် တောင်တန်းကြီးများရှိရာ ဌာနေဟောင်းကို မျက်စိတဆုံး မြင်တွေ့ နေရသည်။ လမ်းလျှောက်သူများသည် ညာမိုတပ် စခန်းတွင် ပြုလုပ်မည့် ယခုလ ၉ ရက်နှင့် ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ကရင်နီအမျိုး ခုခံတော်လှန်ရေးနေ့ နှင့် ၆၂ ကြိမ်မြောက် ကရင်နီတပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ရန် မမောနိုင်မပမ်းနိုင် လမ်းလျှောက် ချီတက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါင်းအလံ လွင့်ထူထားတဲ့ တပ်စခန်း ဆီသို့ အတန်ကြာလမ်းလျှောက်ကြပြီးနောက် ကရင်နီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း ခြေချမိသည်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) စခန်းက ရဲဘော်များက ကျနော်တို့ကို ဆီးကြိုနေကြသည်။ ခွပ်ဒေါင်းအလံ လွှင့်ထူထားသည့် ကျောင်းသားတပ်မတော် တပ်ရင်း (၄) တွင် တာဝန်ကျ ရဲဘော်များက မောမောပန်းပန်းနှင့် ရောက်လာကြသည့် ကျနော်တို့ကို အနားယူဖို့ တပ်စခန်း တန်းလျားတခုတွင် ခေတ္တ အနားယူဖို့ ပြင်ဆင်ပေးသည်။ သို့သော် ကျန်ရှိသည့် အုပ်စုများက အခမ်းအနား ပြုလုပ်မည့် ကရင်နီ ဗဟို စစ်သင်တန်းကွင်း ရှိရာ ညာမိုတပ်စခန်းဆီကို စိတ်အားထက်သန်စွာ မနားတမ်း ခရီးဆက်ကြသည်။ ကျောင်းသား တပ်စခန်းကို ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် တပ်စခန်းကို ဦးစီးနေသည့် ဒု တပ်ရင်းမှူး ကိုတင်မောင်ထွန်းနှင့် သတင်းကိစ္စအတွက် စကားစမြည် ပြောဖြစ်ကြသည်။ မကြာခင် စစ်အစိုးရ ဦးဆောင်ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ် ကြသည်။ စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နှင့် အခြားနိုင်ငံရေးပါတီ စုစုပေါင်း ၄၇ ခုက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ သို့သော် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာသည့်တိုင်၊ စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်တိုက်ပွဲ ၀င်နေကြသည့် ABSDF အဖွဲ့ဝင်များအတွက်မူ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာ ထူးထူးထွေထွေ ရိုက်ခတ်မှု ဖြစ်ပုံမပေါ်။ စစ်အစိုးရ တဖက်သတ် ရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ABSDF အဖွဲ့အနေဖြင့် လက်မခံသည့် အတွက် လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း အထူးတလည် ထည့်စဉ်းစားရန် မလိုအပ်ကြောင်း ဒု-တပ်ရင်းမှူး ကိုတင်မောင်ထွန်းက အခုလိုပြောဆိုလာသည်။ “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတော့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောထားဟာ အရင်ကတည်းက ရှိထားပြီးသားပါ။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို လက်မခံတဲ့အတွက် ၂၀၁၀ ကို ထည့်စဉ်းစားစရာ မလိုပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဒါကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရမှာပါ” ဟု ဆိုသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကိုတင်မောင်ထွန်းက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့လည်း သူစဉ်းစားမှာပါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို သူလည်း လက်ခံခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ NLD အဖွဲ့တခုလုံး အနေနဲ့လည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝဆန့်ကျင် သပိတ်မှောက်ထားပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။ ကိုတင်မောင်ထွန်းက သူနေထိုင်သည့် တဲပုတ်လေးထဲ ဆိုလာပြားမှ တဆင့်ရရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့် အသုံးပြုနေသည့် အိတ်ဆောင် ကွန်ပြူတာကို ထုတ်ကာ ယခင်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးပုံရိပ်များကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည့် ဓာတ်ပုံများကို တခုပြီးတခု ပြကာ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပြနေသည်။ သူက ကျနော့်သတင်းအတွက် လိုအပ်မယ်လို့ ယူဆရသည့် ဓာတ်ပုံဟောင်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက် များကိုလည်း သူက လိုလိုလားလားနှင့် ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တော်လှန်ရေးနယ်မြေထဲကို ရောက်ရှိလာသည့် ကိုဇော်မင်းထွန်းနှင့်လည်း တွေ့ဆုံ အင်တာဗျူးရန် ကိုတင်မောင်ထွန်းကပဲ စီစဉ်ပေးသည်။ ကိုဇော်မင်းထွန်းက “ကျောင်းသား တော်လှန်ရေးမှာ ကျနော် ပြည်တွင်းမှာ နေကတည်းက ပါဝင်တာပါ။ ပြည်တွင်း မှာ နေရင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ စစ်ရေး နည်းလမ်း ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကျနော်က စစ်ရေးနည်းလမ်းမှာ ပိုအားသာတဲ့အတွက် ဒီဘက်ကို ရောက်လာတာပါ” သူ့ခံယူချက်ကို ပြောပြသည်။ ၈လေးလုံး လူထုအုံကြွမှုအပြီး စတင် ထူးထောင်ခဲ့သည့် ABSDF တွင် ယခင်က တပ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တတိယနိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာ သွားသူ အရေအတွက်များလာသည့်အတွက် ယခုအခါတွင် အင်အားတဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာသည်။ သို့သော် ယနေ့တိုင် ABSDF အဖွဲ့ကို ၀င်ရောက်လာသူများ ရှိနေသေးခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့၏ တော်လှန်ရေးမှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေသေးကြောင်း ထင်ရှားသည်။ သတင်းအတွက် တပ်ရင်း (၄) မှာပင် အနားယူရင်း အင်တာဗျူးများလုပ်ကာ ညနေစာကို ထိုစခန်းမှာပင် ၀ိုင်းဝန်းချက်ပြုတ်စားသောက်ကြပြီးနောက် ကရင်နီ ဗဟိုစစ်သင်တန်းကွင်းရှိရာ ညာမိုတပ်စခန်းဆီကို ခရီးဆက်ကြသည်။ လင်းယုန်ငှက်အလံ လွင့်နေတဲ့ စစ်သည်များ ဗဟိုစစ်ရေး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကိုရောက်သွားချိန်တွင် အနီရောင်ပေါ်တွင် အနက်ရောင် လင်းယုန်ငှက် အမှတ် တံဆိပ် ရှိသည့် အလံသုံးခုကို ကိုင်ဆောင်လာသည့် အလံကိုင် စစ်သည် သုံးဦး နောက်က စစ်သည် ၄၀ ကျော် ချီတက်လာနေသည်ကို အဝေးကနေ မြင်နေရသည်။ စိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်းသည့် ရာသီဥတုနှင့် တောင်ကုန်းတောင်တန်း ရွှံ့ပွက်ကြားမှပင် လာရောက် အားပေးကြည့်ရှု နေသည့် ပရိတ်သတ်မှာ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ကရင်နီတပ်မတော်သင်တန်း အပတ်စဉ် (၅၇) မှာ ကရင်နီတပ်သားသစ် ၄၀ ကျော် မွေးထုတ် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် စစ်သမီးအချို့ကိုလည်း တွေ့ရှိလိုက်ရသည်။ နေ့ထူးနေ့မြတ် အခမ်းအနားက မျှော်လင့်ထားသည်ထက် စည်ကားနေသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရကို နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ခုခံတော်လှန် တိုက်ခိုက်နေကြသည့် ကရင်နီတပ်မတော် အနေနှင့် စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် အယုံအကြည် မရှိကြောင်း ပြောဆိုနေကြသည်။ နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှမှုမရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သည့်အတွက် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟုလည်း သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၏ အတွင်းရေးမှူး (၁) ခူဦးရယ်က ယခုလို အခိုင်အမာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့သည်။ “ဒီမိုကရေစီကို ရှေးရှုတဲ့ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မတွေ တခုမှ ပြဌာန်းတာ ကျနော်တို့ မတွေ့ရဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်တဲ့ အချိန်တုန်းက လူထုဆန္ဒကို တကယ်ပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သူတို့ ရယူပြီးတော့ အတည်ပြု ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။ သူက “အခြေခံဥပဒေကို ကျနော်တို့ လက်မခံတာနဲ့ တကြိမ်ထဲမှာပဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် လည်းပဲ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးပဲ ထွက်လာထွက်လာ ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ် မပြုဘူး ဆိုတာ ကျနော်တို့ အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ကျနော်တို့ တတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်း အသွယ်သွယ်ကနေပြီးတော့ ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ အလားတူ ကရင်နီ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဘီထူးကလည်း လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ပြည်သူများအတွက် အကျိုးမရှိဘဲ၊ စစ်တပ်အာဏာခိုင်မြဲရန် ပြုလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ကရင်နီ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဘီထူးက ယခုလ ၁၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ကရင်နီတပ်မတော်နေ့တွင် သီးခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ယခုလို မှတ်ချက် ပေး ပြောဆိုခဲ့သည်။ “ရွေးကောက်ပွဲက နောက်တပိုင်းပဲ။ ကျနော် သိပ်ပြောစရာ များများစားစား မလိုဘူး။ ပြည်သူအကျိုးတွက်လည်း ဘာမှ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အုပ်စုတွေ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပဲ သူတို့ လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုတဲ့အချိန်မှာ ကျနော် ပြည်တွင်းမှာ ရှိတယ်။ ပြည်သူဆီမှာ ဓားပြတိုက်ပြီးတော့ ယူခဲ့တဲ့ မဲတွေပဲဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။ ကျနော် ပြည်သူကြားမှာနေလို့ ကျနော် ပြောတာနော်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ စာအုပ်စိမ်း ရွေးကောက်ပွဲကို လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဟု စစ်အစိုးရက ယခု သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ကြေညာထားပြီးဖြစ်သည်။ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကျခံနေသည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရမည့် ရက်သတ္တပတ် မတိုင်ခင်တွင် ရွေးကောက်ပွဲရက်ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုမူ လူအများက နားလည်သဘောပေါက်ထားကြသည်။ နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့်အပြင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင် ရခဲ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကိုလည်း ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရှိစေရန် စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းပြောဆို နေသည်။ တချိန်ထဲမှာပင် NLD က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် မပါဝင်နိုင်ရေး ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်အပေါ် တားမြစ်ထားသည့်အပေါ် အဖွဲ့ချုပ်က ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက် ထားသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဘီထူးက အတိုက်ခံ နိုင်ငံရေးသမားများအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲထက် အခြေခံဥပဒေကို ပြန်လှည် ပြင်ဆင်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းကို သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းပြမြေပုံ၏ ၂၀၀၈ ခု အခြေခံဥပဒေတွင် လွတ်တော် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်တပ်အား အလိုအလျောက် ပေးထားပြီးဖြစ်သည့်အပြင်၊ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် လိုပါက လွှတ်တော် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အတည်ပြုမှသာလျှင် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိကြောင်း ရေးဆွဲပြဌာန်းထားသည့်အပေါ် ဗိုလ်ချုပ်ဘီထူးက ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရသည် အဖက်ဖက်က မည်သည့် ဝေဖန်ရှုတ်ချမှုနဲ့ ဖိအားပေးမှုများကို ဂရုစိုက်ခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးတွင် အတိုက်အခံ အဖွဲ့များကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း စနစ်တကျ ဖိနိပ်ထားပြီး လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကိုလည်း မိမိတို့ အလိုကျအတိုင်း ဖြစ်လာစေရန် အစီအစဉ်တကျ ပြင်ဆင်ထားသည်။ အတိုက်ခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ နှင့် လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများအနေဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန္ဒပြ ဆန့်ကျင်သွားရန် အစီစဉ်များရှိနေကြသည်။ တဖက်တွင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှုများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများရှိသလို၊ တားဆီးပိတ်ပင်မှုများ ရှိနေသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတ၀ှမ်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည့် စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံ ပါတီတခုဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) သည် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများကို မက်လုံးပေးကာ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးလုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တက်လာမည့် စစ်အစိုးရအလိုတော်ရိ အုပ်ချုပ်သူများနှင့် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသည့် အတိုက်အခံအင်အားစုများ၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများကြား တင်းမာမှုများ မည်သည့် အတိုင်းအတာ အထိ ရှိလာမည်ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမည် ဖြစ်သည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:37 PM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မဟာမုနိ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရမှ မိန်းခလေး ၃ ဦးကို အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား
အရှင်ပညာစာရ ဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့သော မဟာမုနိ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာ ပရဟိတကျောင်းမှ အာဏာပိုင်များ၏ ခေါ်ဆောင် သွားခြင်းကို ခံရသူ အမျိုးသမီးငယ် ၃ ဦးကို ယခုအချိန်ထိ မိဘများလက်သို့ လွဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း မရှိဘဲ ဆက်လက်ပြီး အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ် ၃ ဦးမှာ မဖြူဖြူဝင်း (၁၈ နှစ်)၊ မအေးသိန်းခိုင် ( ၁၆ နှစ်)နှင့် မသန်းနွယ် (၁၆ နှစ်) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
“သူတို့က ကျောင်းသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို ဇူလိူင်လ ၂၇ ရက်နေ့ကတည်းက ခေါ်ထုတ်သွားပြီး ပထမ သူတို့ကို အမှတ် ၁ ရဲစခန်းမှာ ထားပါတယ်။ အခု သူတို့ကို ရူပတောင် ဦးအောင်စိုးသာ ဗွီဒီယိုရုံနားက ရဲလိုင်း တန်းမှာ ပြောင်းရွှေ့ထားပါတယ်။ မိသားစုတွေ သွားတွေ့လို့ ရပေမယ့် အပြင်ကို ခေါ်ခွင့် မပြုဘဲ တားမြစ်ထား ပါတယ်” ဟု သူမတို့၏ ဆွေမျိုး တဦးက ပြောသည်။
မဖြူဖြူဝင်းမှာ ဦးစိန်ရွှေအောင် သမီး ဖြစ်ပြီး ၁၀ တန်းကျောင်းသူ ဖြစ်သည်။ သူမ၏ နေရပ် ဇာတိမှာ မင်းပြားမြို့နယ် ကြိမ်ချောင်းကျေးရွာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မအေးသိန်းခိုင်မှာ ဦးအောင်ကျော်သောင်း သမီး ဖြစ်ပြီး ၉ တန်းကျောင်းသူ ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ဇာတိမှာ ကျောက်တော်မြို့နယ် အုန်းပတီးကျေးရွာ ဖြစ်သည်။
မသန်းနွယ်မှာမူ ၉ တန်းကျောင်းသူ ဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက မိဘ မရှိဘဲ ဆရာတော်ကျောင်းကို ရောက်ရှိ လာသူ ဖြစ်သဖြင့် နေရပ်လိပ်စာ မရှိကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့ကို ဘာကြောင့် ထိန်းသိမ်းထားသလဲ ဆိုတာတော့ တိတိကျကျ မသိရဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ မိဘတွေက လာခေါ်ပေမယ့် ရဲက ပေးမပြန်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့က ကျောင်းမတက်ရဘဲ ရဲစခန်းက လိုင်းတန်းမှာ နေထိုင်နေကြရပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဆရာတော် အရှင်ပညာစာရ ကျောင်းတွင် မိဘမဲ့ ကလေးများအပြင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသဖြင့် ပညာ မသင်နိုင်သူ ကလေး ၁၂၀ ကျော် ရှိပြီး အများစု အသက်အရွယ် ငယ်ရွယ်သူ ကလေးငယ်များကို ဗမာပြည်သို့ အာဏာပိုင် များက ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
စစ်တွေတွင် ကျန်ရှိနေသူ အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ် ၃ ဦးအား ယခုအချိန်ထိ မိဘများထံ လွဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း မရှိသေးဘဲ အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသဖြင့် သူမတို့၏ အနာဂတ်အရေးအတွက် မိသားစုများက စိုးရိမ် နေကြသည်ဟု သိရသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:48 PM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းသို့မှာကြားချက်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:46 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ 27 ရက် 2010 ခုနှစ် BNI သတင်း - မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေးတို့ ရာထူးမှ နားခြင်းအပါအဝင် တပ်မတော် ထိပ်တန်း စစ်ဘက်ရာထူးများတွင် အပြောင်းအရွေ့များ ယနေ့ ဖြစ်ပွားသည်။
ယခင် စစ်ရေးချူပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရမြင့်အောင်က တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး အခြားသော ကစထမှူးတဦးဖြစ်သော ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုမှာ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဖြစ်လာသည်။
အောက်တွင် ရာထူးဟောင်းနှင့် ရာထူးသစ်များကို ပြသထားသည်။ အသေးစိတ်ကို ဆက်လက် စုံစမ်းလျှက် ရှိသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:43 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:02 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
နှစ်ရှည်မတရားထောင်ချခံထားရသော ရှစ်လေးလုံးကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဂျင်မီ နဲ့ မနီလာသိန်း ရဲ့သမီးလေး တို့အတွက်ဂုဏ်ပြုခြင်း။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:41 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားကြသူ ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးသို့ ပန်ကြားချက်
နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားကြသူ ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးသို့ ပန်ကြားချက် Globa Action Campaign to BOYCOTT SPDC's Nov7Sham Elections
နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ၂ဝဝ၈ ညောင်နှစ်ပင်လုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဆက်ခံသွားနိုင်ဖို့ အကွက်ချထားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်တွေက လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ရေးသားထားတဲ့ဥပဒေ မဟုတ်ဘူး။ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲတခုကို နိုင်ငံတကာစံချိန်၊ စံနှုန်းနဲ့အညီ တာဝန်ယူကျင်းပပြုလုပ်နိုင်လောက်အောင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိ တဲ့သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ နအဖခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးနေရတဲ့ အရေခြုံကော်မရှင်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီဆိုတာဟာ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို သယ်ပိုးထမ်းရွက်ဖို့ ပြည်သူလူထုက ယုံကြည်ကိုးစား တဲ့သူတွေပါဝင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုမဟုတ်ပါဘူး၊ စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ဟန်ပြထားတဲ့ အာဏာရူးစစ်အုပ်စုအသိုင်းအဝိုင်းက ဂုတ်ပေါ်ခွထိုင်ထားပြီး ရာသက်ပန်အတ္တကိုယ်ကျိုးစီးပွားတခုတည်း ဖော်ဆောင်ဖို့စိုင်းပြင်းနေတဲ့ လူလိမ်လူကောက် လူသတ်သမား၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ပါတီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ အကြမ်းဖက်လူသတ်သမား စစ်အုပ်စုကို တရားမဝင် အာဏာသိမ်းစစိအစိုးရ အဖြစ်က ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံ တရားဝင်စစ်အစိုးရဖြစ်ဖို့ အကွက်ချထားတဲ့ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာမှ သံသယဖြစ်စရာမလိုဘူး။ နအဖပေးမှ ဒီမိုကရေစီဆိုတာရနိုင်မှာမို့ နအဖပေးသလောက်နဲ့ ယူကြစို့ဆိုတဲ့ အယူအဆသမားတွေ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာလေ အသက်ရှုကြပ်လေဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကိုလည်း အားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲမစခင်ကတည်းက နအဖထားရာနေ စေရာသွား ခိုင်းတာလုပ်နေရတဲ့ အတိုက်အခံပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ရွေး ကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဘုရားစူး သက်သေပြနိုင်ဖို့ ရုပ်ပြကောင်အဆင့်နဲ့ပဲ ဇာတ်သိမ်းသွားမှာပဲဆိုတာကိုလည်း မြင်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်မခံနိုင်ဘူး၊ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ဘူး၊ ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ကို ဘယ်လိုမှ မဲမပေးဘူး။ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းစောင်းမကျန် ကမ္ဘာအနှံ့ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပွဲတွေဖော်ထုတ်ကြပါစို့-။
လျာထားသတ်မှတ်ရက်- ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ စနေနေ့။ (နအဖ အာဏာသိမ်းနှစ်ပါတ်လည်နေ့)
ခေါင်းစီး- Boycott to Burma spdc's sham elections,
လှုပ်ရှားမှုအသွင်သဏ္ဍန်- စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲ၊ သရုပ်ပြပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲ
(မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် အဆင်ပြေနိုင်သည့် လှုပ်ရှားမှုမျိုးကို ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်၊ ဥပမာ
ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအဆောက်အဦးရှေ့နှင့် လူစည်ကားရာအရပ်များကို ဖြတ်သန်း၍ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း၊ ဂျပန်ပြည်သူလူထုမှ
ဂျပန်အစိုးရအား နအဖစစ်အုပ်စု၏ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုရန်လှုံ့ဆော်တောင်းဆိုသည် လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဂျပန်နိုင်
ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ မိမိတို့၏ အမည်၊ ဓာတ်ပုံ၊ နေရပ်လိပ်စာ တို့ကို ဖော်ပြလက်မှတ်ထိုးထားသော နအဖစစ်အုပ်စု၏ ရွေးကောက်ပွဲကို
အသိမပြုရန်တောင်းဆိုသည့်စာများကို ဂျပန်အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ တရုပ်၊ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊
တောင်အာဖရိက သို့ ပေးပို့ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။)
အမိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ စုစည်းညီညွတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမည့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေနဲ့ အမည်စာရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရန် မေးလ် တို့ကို ပေးပို့ကြပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်- thanswe@gmail.com, lwinaungsoe@gmail.com သဘောတူညီချက်ရထားပြီးဖြစ်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံရောက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာတို့ကို စာမျက်နှာ (၂) တွင် ဖော်ပြထား ပါသည် ထပ်မံပါဝင်လာသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံများကို ချက်ခြင်း updateလုပ်၍ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၁)ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ
1. Arakan League for Democracy (ALD Exile-JP)
2. Burma Democratic Action Group (BDA Group)
3. Chin National Community (CNC-Japan)
4. Democratic Federation of Burma (DFB)
5. Kachin National Organization, Japan (KNO-JP)
6. Kachin State National Congress for Democracy (Liberated Area-Japan)
7. Karen National League (KNL-JP)
8. Karen National Union – Japan (KNU-JP)
9. Naga National Society (NNS)
10. National Democratic Front (Burma) (NDF (B) Representative for Japan
11. Palaun National Society (PNS)
12. Punnyagari Mon National Society (PMNS)
13. Shan Nationalities for Democracy - Japan (SND-JP)
14. Shan State Nationalities for Democracy - Japan (SSND-JP)
15. Confederation of National Youth for Burma (Japan Branch) (CNYB (JB)
16. Save Burma
17. Peaceful Burma
(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေ၊ ဂျပန်ဌာနခွဲ
(၃) မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဂျပန်
(၄) မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများသမဂ္ဂ၊ ( FWUBC)
(၅) မြန်မာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၊ ဂျပန်၊ ( FTUB )
(၆) လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ဂျပန်ဌာနခွဲ။ ( DPNS Japan)
(၇) ဟော်တယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်လုပ်သားများ သမဂ္ဂ၊ ဂျပန်။
(၈) မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီ။ ( ABFSU)
(၉) မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ပျော်များသမဂ္ဂ၊ ဂျပန်။
(၁ဝ) အလင်းအိမ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျပန်။
(၁၁) အဟာရ စာစောင်။ ဂျပန်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:15 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁ဝ ခုတွင် သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့် ကန္တာရ ဆန်လာကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် ဦးအုန်းက ပြောသည်။
သစ်ပင်ခုတ် ရောင်းခြင်း၊ ထင်းမီးလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း အပါအဝင် အလယ်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သည့် မကွေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် မွန်၊ ရခိုင်၊ တနင်္သာရီ၊ ဧရာဝတီ စသည့် ဒီရေတောပေါက်ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုအထဲ အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသများတွင် အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး ကျန်ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများမှာ အနည်းငယ် ခံသာ နေသေးသည်ဟု သိရသည်။
“ ဒီတိုင်း ၃ ခုက အပူပိုင်း ဒေသလည်းဖြစ်တော့ အပူချိန်အရမ်းပြင်းတယ်။ အဲဒါကြောင့် တော်တော့ကို ဆိုးနေတယ်။ မြေကြီးရဲ့ အရည်အသွေး ကျဆင်းပျက်စီးမှုက ပိုများပါတယ်။ ကျန်တဲ့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေ ကျတော့ သူတို့ထက်စာရင် မိုးပိုရွာတယ်။ အပူချိန်လဲ အဲလောက်မများဘူးဆိုတော့ ဖြစ်တော့ ဖြစ်တယ်။ သူတို့လောက်မများဘူးပေါ့” ဟု ဦးအုန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မကွေး၊ ရေနံချောင်း၊ ချောက် စသည့်နေရာများတွင် အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း ငွေအား၊ လူအား အဘက်ဘက်မှ ဒေါင့်မစေ့နိုင်သလို နည်းပညာ အားကလည်း ထင်သလောက် တိုးတက်မလာသေးဟု ဆိုသည်။
မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် မြိုင်သာယာ ကျေးရွာအနီးရှိ တောင်နီတောင်မှ သစ်တောအုပ် ကိုလည်း တောင်အနီးတဝိုက်တွင် နေထိုင်ကြသည့် ဒေသခံများက ထင်းလောင်စာအဖြစ် ခုတ်၍ ကျောက်ပန်း တောင်း မြို့ပေါ်သို့ တင်ပို့ ရောင်းချနေသည်ဟု မြိုင်သာယာ ကျေးရွာမှ ရွာခံတဦးက ပြောသည်။
“လယ်ယာ ကိုင်းကျွန်းရှိတဲ့လူတွေကတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ရွာ အပါအဝင် ဒီနားမှာရှိတဲ့ ညောင်တို၊ မန်ကျည်းတန်း၊ ကိုင်း အစရှိတဲ့ရွာတွေက အခြေခံလူတန်းစားတွေက ဒီတောင်ပေါ်က ထင်းခုတ်ပြီးမှ ရောင်းမစားရရင် ဘာဝင်ငွေမှ မရှိဘူးလေ။ ထမင်းငတ်သွားမှာပေါ့” ဟု မြိုင်သာယာရွာသား တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်း ခြောက်သွေ့ဒေသများတွင် မိုးရွာသွန်းမှု နည်းပါးလာခြင်းကြောင့် အဆိုပါ ဒေသများရှိ တောင်သူလယ်သမားတို့သည် ငတ်မွတ်မှုဘေးနှင့် ပိုမိုကြုံတွေ့လာရသည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒီ ထင်းအစားထိုးတယ်ဆိုတာကို ထင်းတစ်ချောင်းမီးဖိုနဲ့ ထိုးမှာလား။ စပါးခွံနဲ့ ထိုးမှာလား။ ဂတ်စ်နဲ့ထိုးမှာလား။ ဒီအပေါ်မှာလည်း တည်တာပေါ့။ အဲဒီတော့ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ဂတ်စ်မီးဖိုတွေ၊ ရေနံငွေ့တွေ၊ ဓာတ်ငွေ့တွေကို လုံလုံလောက်လောက်ပေးမယ် ပြုမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ထင်းခုတ်ချင်ပါ့မလဲနော်။ အဲဒီလို ထောက်ပံ့မှုတွေ အပေါ်မှာ တည်တာပေါ့။ အဲဒီလိုသာ ကူမယ်ဆိုရင်တော့ အလွန်ဆုံး ၅ နှစ်၊ ၁ဝ နှစ်။ အလွန့်အလွန် ၁၅ နှစ်ဆိုရင် စိမ်းလာမှာပါ”ဟု သူက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် သဘာဝသစ်တောကြီးများမှ သစ်မာပင်များကို မြန်မာအစိုးရနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်း ထုတ်ရောင်း နေမှုကြောင့် ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် လျော့နည်းသွားပြီဖြစ်ပြီး သစ်တော ပြုန်းတီးမှု၏ အဓိက တရားခံမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရသာ ဖြစ်ကြောင်း ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် (KDNG) ဥက္ကဋ္ဌ ကိုအောင်ဝါ က ပြောသည်။
“ကချင်ပြည်နယ်က သစ်တောတွေကတော့ အဓိက စစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး သစ်တွေထုတ် ရောင်းနေတာဖြစ်တယ်။ နောက်တချက်ကတော့ ဒေသခံတွေက သစ်တောငယ်တွေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး စပါးစိုက်တာတွေပါတယ်” ဟု ကိုအောင်ဝါက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ခမောက်ပုံကို စာပေစိစစ်ရေးက သတင်းဂျာနယ်များတွင် ဖော်ပြခွင့် မပြုကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောဆိုသည်။
ယခုလ ပထမပတ်မှစ၍ ရန်ကုန်ရှိ အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ်များဖြစ်သည့် Monitor ၊ The Hot News နှင့် The Voice Weekly တို့တွင် NDF ခေါင်းဆောင်များ၏ အင်တာဗျူးနှင့် ပါတီတံဆိပ် ခမောက်ပုံကို စာပေ စိစစ်ရေးသို့ တင်ပြရာတွင် ခမောက်ပုံကို ဖော်ပြခွင့် မရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ခမောက်တံဆိပ်ကို စာပေစိစစ်ရေးက ဖော်ပြခွင့် မပြုကြောင်း ပိတ်ပင်ခံရသည့် ဂျာနယ်များနှင့် နီးစပ်သူများ ကလည်း ပြောဆိုကြသည်။
တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးသည့် ပါတီတခုအနေဖြင့် ပါတီတံဆိပ်ကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းနှင့် အခြားပါတီများ၏ အမှတ်တံဆိပ်များကို ဖော်ပြခွင့်ရနေသော်လည်း ၎င်းတို့ပါတီကိုမှ ဖော်ပြခွင့် ကန့်သတ်ကြောင်း NDF အဆိုအရ သိရသည်။
“ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုထားတဲ့ တံဆိပ်ကို ဘာလို့ ဖော်ပြခွင့်မရမှာလဲ။ တခြားဂျာနယ်တွေရော၊ ကျနော်တို့ ဂျာနယ်ရော ဖော်ပြခွင့် ရပါတယ်” ဟု Monitor သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လထုတ် Monitor တွင် NDF ပါတီအကြောင်း သတင်းတရပ်တွင် ခမောက်ပုံကို ပူးတွဲဖော်ပြခွင့် ရရှိခဲ့သေးသည်။
NDF အနေဖြင့် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားစဉ်က ခမောက်တံဆိပ် အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဆက်လက် အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့သည်ကို စာပေစိစစ်ရေးသို့ အကြောင်း မကြားသဖြင့် သတင်းဂျာနယ်များတွင် ခမောက်တံဆိပ် ဖော်ပြခွင့် ပိတ်ပင်ထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း စာပေ စိစစ်ရေးနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောဆိုသည်။
ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် NDF သည် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ၁ဝဝ ဝန်းကျင်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည့် ပါတီဖြစ်သည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:31 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ခြင်ဆေးခွေအသုံးပြုကြသော ပြည်သူများအတွက် သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြည်ပမှ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ခြင်ဆေးခွေများ ၀င်ရောက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနေသော ခြင်ဆေးခွေအချို့မှာ တရားဝင် ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုထားခြင်း မရှိသော အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပိုးသတ် ဥပဒေအရ ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့တွင်လည်း တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက် ရယူထားခြင်း မရှိပါ။ ယင်းခြင်ဆေးခွေများတွင် အဆိပ်ရှိ ပစ္စည်းပါဝင်မှု ပမာဏမှာလည်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးပါဝင်မှု ပမာဏထက် ပိုမိုပါဝင်နေပါသဖြင့် အသုံးပြုသူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ သို့ပါ၍ အဆိုပါ ခြင်ဆေးခွေများကို သုံးစွဲခြင်း မပြုကြရန်နှင့် ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသော အဆိပ်ရှိ ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ခြင်ဆေးခွေများကို တင်သွင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို တားဆီး အရေးယူခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းမှုပြုလုပ်ရန် (၁၈)ကြိမ်မြောက် ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:28 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မတရား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း
မတရား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲကို ယနေ့ ၂၀၁၀ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ၂၀ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့ နအဖစစ်အခွန်ရုံးရှေ့တွင် ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ပူးပေါင်း ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ၇၀ ကျော်ခန့် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။
ဓါတ်ပုံ။။ Aung Htoo Thein(Japan)
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:58 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗဟန်း မြို့နယ် အမှတ် (၂) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခြင်း(၆)နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း...
အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗဟန်း မြို့နယ် အမှတ် (၂) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း သီရိပျံချီ ဦးကြည်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်း(၆)နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို ယနေ့ မနက်ပိုင်းက တောင်ဒဂုံ ၁၈ ရပ်ကွက်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်...။
သြဂတ်စ်လဟာ ချစ်သူခင်သူ တန်ဘိုးရှိသူတွေကို သေမင်းကခေါ်တဲ့လလို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အခု သြဂတ်စ် ၁၉ ရက်နေ့ ဆိုရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် ဒုဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးဟောင်း သီရိပျံချီဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ၆ နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ကိုပို့ပေးတဲ့ သွေးပြန်ကြော ၅၀ ရာနှုန်းပဲ အလုပ်လုပ်တော့တဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်တွေမှာတောင် လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကို စာပေသင်ကြားပေးခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၄ ၊ ၈၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မွန်းလွဲ (၁၂း၁၅) မှာ ရွှေတောင်ကြား(၁) ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘောဇ ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ ဘဘနေထိုင်ရာအမှတ်(၂၄) နေအိမ်မှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ။။ အမြဲပေးပို့ပေးသူနှင့် ကိုစိုင်း
သတင်း။။ ဒီမိုဝေယံ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတင်။။ မခင်မင်းဇော်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:50 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် (၂၉) နှစ်မြောက်
ကျွန်တော်က ညာတောင်ပံ.... ဆိုလျှင်
သူမက ညာတောင်ပံ .... ဆိုလျှင်
ထိုသို့ .... နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်ဖြင့် ပျံသန်းလာမှု
နှစ်ဆယ့်ကိုး (၂၉) နှစ် တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ဤသို့ .... ပျံသန်းမှု၊ လျှောက်လှမ်းမှုတို့သည် ....
အဖြူထည် သက်သက်သာ ဖြစ်တော့သည်။
ထိုကဲ့သို့ အဖြူထည်သက်သက်ဖြင့် ပျံသန်းလျှောက်လှမ်းနေသော ဦးတည်အရပ်သည်ကား
မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြား မိန့်မှာခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းမှုရှိရာ အရပ်ဒေသ။
ဤကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိရာ အရပ်ဒေသသို့ကျွန်တော် ကျွန်မတို့နှင့်အတူ ပျံသန်းကြရင်း၊
အတူလက်တွဲ လျှောက်လှမ်းကြရင်း၊ ဖြူစင်သော စားဖွယ်တို့ကို သုံးဆောင်ကြပါရန်
ဖြူစင်သော စိတ်စေတနာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျော်သူ + ရွှေဇီးကွက်
မှတ်တိုင်ထူမည့် နေ့ရက် ။ ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့
မှတ်တိုင်ထူမည့် အချိန် ။ ။ နံနက် (၁၀) နာရီ
မှတ်တိုင်ထူမည့် နေရာ ။ ။ "သုခအဟာရ" စားသောက်ဆိုင်
အမှတ် (၁၃-က) ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:24 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Labels: အမှတ်တရမှ သတိတရသို့မှတ်တမ်း, ဦးကျော်သူ
မတရား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ
မတရား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက...
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:23 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးသည့်နောက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း။
၂ဝဝ၉ နှစ်ဆန်း၌ပြည်ပတွင်ရှိနေကြသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ (အက္ခရာစဉ်အလိုက်)
စဉ်။ အမည်၊ မဲဆန္ဒနယ်၊ ကိုယ်စားပြုပါတီ
1. ခွန်မားရ်ကိုဘန်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ကယန်းအမျိုးသားများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့
2. ဒူးဝါးဇော်အောင်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
3. ဦးခင်ကျော်ဟန်၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
4. ဦးချစ်တင်၊ မင်းလှ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
5. ဦးခွန်မြင့်ထွန်း၊ သထုံ (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
6. ဦးစိုင်းဝင်းဖေ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
7. ဦးတင်ထွတ်၊ အိမ်မဲမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
8. ဦးတင်ထွန်းအောင်၊ ယင်းမာပင် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
9. ဦးတယ်ရီဘူးရီ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
10. ဦးထွန်းဝင်း၊ မင်းပြား (၂)၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
11. ဦးထန်လျန်ပေါင်၊ တွန်းဇန်မြို့နယ်၊ ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက်
12. ဦးဒယ်နီရယ်အောင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ လားဟူအမျိုးသားဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးပါတီ
13. ဦးပီတာလင်းပင်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် (၂)၊ တသီးပုဂ္ဂလ
14. ဦးဗိုလ်သောင်း၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
15. ဦးဘိုလှတင့်၊ မိုးကုတ်မြို့နယ် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
16. ဦးမြဝင်း၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
17. ဦးလျှန်အုပ်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၊ တသီးပုဂ္ဂလ
18. ဦးလှဦး၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
19. ဦးဝင်းလှိုင်၊ တပ်ကုန်း (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
20. ဦးသန်းစိန်၊ ပုလဲမြို့နယ် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
21. ဦးသာနိုး၊ ရသေ့တောင် (၂)၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
22. ဦးသိန်းဦး၊ မန္တလေးအနောက်တောင် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
23. ဦးနိုင်သောင်းရှိန်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် (၂)၊ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့
24. ဦးကျော်သွင်၊ ခရမ်းမြို့နယ် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
25. ဦးစောတာရူးတူး၊ ဖါးဆောင်းမြို့နယ်၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
26. ဦးမောင်မောင်လတ်၊ ဘီလင်းမြို့နယ် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
27. ဦးမောင်မောင်အေး၊ မန္တလေးအရှေ့မြောက်မြို့နယ် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
28. ဦးအောင်ထွန်းစိန်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
29. ဒေါက်တာစန်းအောင်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် (၂)၊ တသီးပုဂ္ဂလ
30. ဒေါက်တာစိန်ဝင်း၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ
31. ဒေါက်တာဇလှေထန်း၊ ဖလမ်းမြို့နယ်၊ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
32. ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၊ ပုလဲမြို့နယ် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
33. ဒေါ်စန်းစန်း၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပြည်ပရောက်ရှိပြီးနောက် ပြည်တွင်းပြန်ဝင်သွားကြသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
စဉ်။ အမည်၊ မဲဆန္ဒနယ်၊ ကိုယ်စားပြုပါတီ၊ မှတ်ချက်
၁။ ဦးသန်းကြွယ်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၃၁-၁-၉၁ ရက်နေ့တွင် ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာသံရုံး၌ အညံ့ခံခဲ့သည်။
၂။ ဦးမြင့်အောင်၊ ကံမမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၃၁-၁-၉၁ ရက်နေ့တွင် ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာသံရုံး၌ အညံ့ခံခဲ့သည်။
၃။ ဦးမဖန်းဆင်၊ ချီဖွေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၅-၆-၉၄ ရက်နေ့တွင် နဝတ ထံအညံ့ခံ၍ပြည်တွင်းပြန်ဝင်။
၄။ ဦးယောစီ၊ ပူတာအို မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၅-၆-၉၄ ရက်နေ့တွင် အညံ့ခံ၍ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်။
၅။ ဦးကျော်မောင်၊ မိုးညှင်း မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၅-၆-၉၄ ရက်နေ့တွင် အညံ့ခံ၍ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်။
၆။ ဦးကြာမြ၊ မိုးညှင်း မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၅-၆-၉၄ ရက်နေ့တွင် အညံ့ခံ၍ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်။
၇။ ဦးအင်နန်းဂန်၊ မချမ်းဘော မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၅-၆-၉၄ ရက်နေ့တွင် အညံ့ခံ၍ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်။
၈။ ဦးမြင့်မောင်၊ အိမ်မဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အညံ့ခံခဲ့သည်။
စဉ်။ အမည်၊ မဲဆန္ဒနယ်၊ ကိုယ်စားပြုပါတီ၊
၁။ ဦးဝင်းကို၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
၂။ ဦးလှဖေ၊ ပျော်ဘွယ် မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
၃။ ဒေါက်တာမျိုးဝင်း၊ ကဝ မြို့နယ် (၁)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:34 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Labels: ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ
ဗုဒ္ဓဘာသာခုတုံးလုပ်၊ ဗုဒွဘာသာလို့ အမည်ခံတဲ့ မိုးပြာဂိုဏ်းအကြောင်း
လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော်ခန့်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများစွာတို့၏ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တို့ကို ခြွေယူတိုက်စားသွားခဲ့ကြောင်း အားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းအန္တရာယ်ဆိုးကြီးကို အချိန်မီကြိုတင်သိရှိကာ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရှောင်တိမ်းနေနိုင်မည်ဆိုပါက လူပေါင်းများစွာတို့ အသက်ဘေးမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင်လည်း ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွင်းသို့ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟု နာမည်ပေးထားသည့် မိုးပြာရောင် သာသနာဖျက်မုန်တိုင်းကြီးသည် မင်းကွန်း၊ မန္တလေးနှင့် စစ်ကိုင်းတို့၌ အခြေတည်ကာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဖြစ်ပေါ်၍ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို ဖျက်ဆီးပစ်မည့် မုန်တိုင်းအသွင်ပြောင်းကာ တဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးထွားလာပြီးလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး သာမက ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာရပ်ဝန်းကြီး တစ်ခုလုံးဆီသို့ တိုက်ခတ်ရန် ဦးတည်လျှက်ရှိနေပါသည်။ သဘာဝမုန်တိုင်း ဘေးအန္တရာယ်သည် မိမိ၏ အသက်တစ်ခု၊ ဘ၀တစ်ခုမျှကိုသာ ဒုက္ခပေးနိုင်သော်ငြားလည်း ထို မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ မုန်တိုင်းကြီးကမူ သံသရာတစ်လျှောက်လုံး ဒုက္ခပေး၍ အပါယ်ဘေးသို့တိုင်အောင်နစ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့ပါ၍ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်၊သူတော်ကောင်းလောင်းလျာတို့အတွက် ဤသာသနာဖျက်မုန်တိုင်းကြီး၏ဘေးမှ ဝေးစွာရှောင်ရှား၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေသောငှာ ထိုဂိုဏ်းကြီး၏ဟောပြောချက်၊ ၀ါဒဖြန့်ချိချက်များကို အကျဉ်းချုပ်၍ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းချုပ် ဓမ္မ၀ိဟာရီ ဦးဥာဏ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
နေရပ်လိပ်စာ - (၁) အမှတ် ၂၀၊ မိုးပြာခြံ၊ သစ္စာပန်းလမ်း၊ မြဥယျာဉ်၊ (ဌ} ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် (၂) အနုပါဒါယဉ်ကျေးမှုတရားဌာန၊ မိုးပြာခြံ၊ ရန်ကင်းတောင်ခြေ၊ ကျီကုန်းစု၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်း။
သင်ကြားပေးသည့် ဆရာတော်များ - မစိုးရိမ်တိုက်နှင့် မိုးကောင်းတိုက် ဆရာတော်များ၊ တောင်သမန်တိုက်ဆရာတော်များ။ စာသင်နှစ် - အသက် ၂၅ နှစ်၊ ၅ ၀ါထိ။
ဘာသာပြောင်းရသည့်အကြောင်း - ထေရ၀ါဒ၌နေစဉ် ထေရ၀ါဒ လက်ခံကျင့်သုံးနေသော ရှေးဘ၀၊ ခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀ အယူများသည် ဘုရားဟောနှင့်မညီ၊ ဘုရားရှင်မယူသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူများဖြစ်နေကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယကထံသို့တင်ပြ၍ တရားစွဲသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်း သာသနာရေး ဦးစီးမှူးက စတုတ္ထပါရာဇိကဖြင့် ပြန်လည်တရားစွဲခဲ့ပြီး ဗဟိုဝိနိစ္ဆယထိ တရားရှုံးသောကြောင့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ရဟန်းအဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်ရသည်။
မိုးပြာဂိုဏ်းထောင်၍ ဆည်းကပ် သူများအား ဆုံးမလမ်းညွှန်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ ဘာသာရေးဂိုဏ်းကြီး၏ ထေရ၀ါဒနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သော အယူဝါဒအချို့ကို ထုတ်နုတ်ပြရမည်ဆိုလျှင်..... (၁) အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကို ဘုရားဟောမဟုတ်ဟု ယူကြသည်။
မိုးပြာဦးဥာဏ၏ ဟောပြောချက်၊ ရေးသားချက်တချို့ကို မူရင်းအတိုင်း ကောက်နုတ်တင်ပြပါမည်။ ရှေးဘ၀၊ နောက်ဘ၀ လက်မခံ ကျုပ်တို့က သူတို့ကို အဓိကဆိုဆုံးမတာမှာ ... ဘယ်တရားမှ မရချင်နေ၊ ရချင်ရ၊ ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀တော့ မတွေးရဘူးလို့ ဆိုတာ လောက်ကတော့ ကျုပ်တို့ကိုချဉ်းကပ်နေတဲ့ ချာတိတ်ကလေးတောင် သိတန်ရာတယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲဒီတော့ သူဆိုတာက ကျုပ်တို့အနားမှာ အချဉ်းကပ်ရဆုံးသူလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျုပ်တို့ကို ငွေနဲ့ကြေးနဲ့ အများဆုံး အကုန်ကျခံရဆုံး ပြုစုတဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတောင်မှ ကျုပ်တို့ရဲ့ အစဆုံးဖြစ်တဲ့ (ရှေးဘ၀၊ နောက်ဘ၀ မတွေးရဘူးဆိုတဲ့) ဟာကို (လာလျှောက်တယ်)၊ ရှေးဘ၀၊ နောက်ဘ၀ကို တကယ်မြတ်စွာဘုရား မဟောပါဘူး။ ကျုပ်တို့ကလည်းပဲ ရှေးဘ၀၊ နောက်ဘ၀ကို လုံးဝမဟောကြားဘူး။ ရှေး ဘ၀၊ နောက်ဘ၀ကို ယူဆတဲ့သူဆိုရင်ဖြင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးသကာလ ... ကျုပ်တို့နဲ့ ပဋိပက္ခအနေအထားမှာ ရှိတယ်။ (ရှင်မိုးပြာ၏ ဘာသာတရားကပေးသော ဆုလာဘ်၊ စာ ၂၊ ၁၉၉၆) လက်ခံလျှင် အကျိုးမရှိ တို့ နောက်ဘ၀သိလား။ (မသိဘူး)၊ အေး ... မသိဘူးစာရင်းထဲ အသေကို ထည့်သွင်းရမယ်။ နည်းနည်းကလေးမှ ခေါင်းပြူမလာစေနဲ့။ မသိတာကို မသိတဲ့အတိုင်း မသိစာရင်းထဲ ထည့်မထားမိဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ် သို့မဟုတ် မသိတာကို မသိစာရင်းထဲထည့်ပေမဲ့ ခေါင်းထောင် လာပြီး လူရည်လည်လုပ်တာကို ခံရတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက်ထိ ဘာသာတရားရဲ့အမှုတော်တွေကို ထမ်းထမ်း၊ ဘယ်လောက်ထိ ဘာသာတရားကို ကျိုးကျိုးနွံနွံ ကိုင်းကိုင်းရှိုင်းရှိုင်း ဆည်းကပ်ဆည်းကပ်၊ ဘယ်တော့မှ အဲဒီဘာသာတရားရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို မခံစားရဘူး။ (ရှင်မိုးပြာ၏ ဘာသာတရားကပေးသော ဆုလာဘ်၊ စာ ၁၁-၁၃၊) ၃၁ ဘုံ လက်မခံ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားဟာ ကြံဆချက်သက်သက်တွေ မပါတဲ့ (အတက္ကာဝစရ) တရားဓမ္မဖြစ်လို့ (အဲဒီ ဗုဒ္ဓတရားထဲမှာ) မမွေးမီနဲ့ သေပြီးတို့၊ အထက်ဘ၀ဂ်၊ အောက်အ၀ီစိတို့ ... မပါဘူး။ (ဓမ္မ၀ီဟာရီ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် မြန်မာပြည်၊ စာ ၁၀၊ ၂၀၀၆) လူကိုတော့ မသတ်နှင့် လူသိများတာက ဘုရားဟာ သတ်မှုက ရှောင်ရမဲ့အသက်ကို အားလုံးရဲ့အသက်အဖြစ် ဟောတာလို့သိနေကြတယ်။ ဒီလို သိမှား တာကတော့ ဟိန္ဒူနဲ့နွှယ်ပြီး သိမိလို့ပါပဲ။ ဟိန္ဒူက မသတ်ရတဲ့ဟာ အားလုံးရဲ့အသက်ပါပဲ။ သစ်ပင်လောက်ပဲ ကျန်ပါတယ်။ (ဘုရား၊ စာ ၁၃၁) ဒါတွေကြောင့်ဘုရားရဲ့မသတ်ရမဲ့အချက်ရဲ့အနက်ဟာလူ့အသက်ပဲဖြစ်တယ်။ အခြားအကောင်ပလောင်တွေရဲ့ အသက်မဟုတ်ဘူး။ (ဘုရား၊ စာ ၁၃၅) အများပိုင်ပစ္စည်း ခိုးနိုင်သည် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းခိုးတာဟာ ဂရုဓမ္မသီလ (မခိုးရသိက္ခာပုဒ်) မပျက်ဘူး။ မြို့ပိုင်၊ ရွာပိုင်၊ ဌာနဆိုင်ရာပိုင်၊ အဖွဲ့အစည်းပိုင်၊ သမ၀ါယမ ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ခိုးတာဟာလည်း ဂရုဓမ္မသီလ (မခိုးရသိက္ခာပုဒ်) အရ အခိုးမမြောက်ဘူး။ (ခိုးကောင်းတယ်ဟူလို။) မမူးအောင်သောက် သေရည်သေရက် မူးယစ်သေစာကို မေ့လျော့တဲ့နေရာအထိ မူးယစ်ခြင်းမှရှောင်မယ်ဆိုတာမျိုး အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ဒီတော့ ဒီသိက္ခာပုဒ် အဓိပ္ပာယ်ဟာ သေရည်သေရက် (မူးယစ်ဆေးဝါး) မသောက်သုံးရဘူးလို့သာ အဓိပ္ပာယ်မရဘူး။ မေ့လျော့တဲ့အထိ ဒါတွေ မသောက်သုံး ရဘူးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ အတိုင်းအထွာရှိရှိ ယစ်မူး၊ သောက်စားရင် ပမာဒဌာန မရောက်ဘူး။ သူတို့ဟာ ဘာမှမမှားဘူး။ အပြုအမူလည်း မမှားဘူး၊ အပြောအဆိုလည်း မမှားဘူး။ အနေအထိုင်လည်း မမှားဘူး နဂိုအတိုင်းပဲ။ (ဘုရား၊ စာ ၁၅၁၊ ၁၆၉-၁၇၀) ဘာသာတရား မလိုအပ်
လောကကြီးမှာ ဘာသာတရားတွေကတောင် အပိုဖြစ်နေတယ်။ ဘာသာတရားမဟုတ်တော့ဘဲ ပကတိ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ၊ ကိုယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေနဲ့သာ နေထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပြီးသွားမှာ။ မြတ်စွာဘုရားဆိုရင် အဲဒီ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ၊ ကိုယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ ကိုပဲ ပြောခဲ့တာပါ။ ဟိုလိုလုပ်၊ ဒီလိုလုပ်ဆိုတာတွေ ကို တားမြစ်ခဲ့တာပါ။ (ဓမ္မ၀ိဟာရီ၏ နိဗ္ဗာန်ကိုသွား နောက်ဆုံးရထား၊ စာ ၃၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်) စိဉ္စမာနလက်သစ်
“မာနတ်က မှိုင်နေလို့ သမီးသုံးယောက်က မေးတော့ ဘုရားကို ရှုံးခဲ့လို့ ပြောတဲ့အခါ ဒါ သူတို့ လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး သမီးတွေက ဘုရားရှင်ဆီ ချဉ်းကပ်တယ်ဆိုတာကြားဖူးမှာပဲ”
“မာနတ်ရော သမီးတွေပါ တကယ်နတ်သား နတ်သမီးတွေ မဟုတ်ဘဲ ဘုရားစိတ်တော် ဖြစ်တွေဆိုတာ သိလောက်ပြီပေါ့နော်”
“မာနတ်ရဲ့ သမီးလတ်ဆိုသူ အပျိုရွရွဖားဖားနဲ့ ဖိုမ ဆက်ဆံမလားပေါ့ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မ ကို လူတွေဆီ ဖြန့်ဖို့က ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်လို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ ဒီထက်သာမယ့် ကိုယ်ဝန်ရှိစ မာရ်နတ်သမီးကြီးနဲ့ ဖိုမဆက်ဆံမလားပေါ့၊ ဒါ ခံစားယစ်မူးပြီး ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မ ဖြန့်ဝေမူ့ အပျက်ခံလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ လို့ဖြစ်တယ်။
“အပျိုဖော်ဝင်စ မာရ်နတ်သမီးငယ် အပျိုပေါက်နဲ့ ဖိုမဆက်ဆံမလားပေါ့၊ ဒါတွေနဲ့ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မ ကို လူတွေရတာ မဖြစ်ထိုက်ဘူးလို့ စိတ်တော်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်”
“မာရ်နတ် သမီးသုံးယောက်ကို ဘုရားအောင်ခံနိုင်တယ် ဆိုတာလား ဘုရား” “ဟုတ်တယ်”
မင်းကွန်းတောင်ရိုးတွင် တရားကျင့်ကြံရာမှ မိမိကိုယ်ကို ရဟန္တာဖြစ်သည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ သံဃာ့ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့က ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ မြို့နယ်ဝိနည်းဓိုရ်၊ တိုင်းဝိနည်းဓိုရ်၊ နိုင်ငံတော်ဝိနည်းဓိုရ် အဆင့်သုံးဆင့်စလုံးတွင် ရှုံးနိမ့်သည့်အတွက် ဦးဥာဏကို လူဝတ်လဲစေခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၀ိနည်းဓမ္မကံ (၉-၁၁) တို့ဖြင့် တရားစွဲခံရပြီး ၁၉၈၃ မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တိုင်အောင် ထောင်သုံးနှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။ ၀ိနည်းဓမ္မကံ (၉-၁၁) အရ တရားစွဲခံရသော်လည်း မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်ဘုရား၏ မေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့် ထောင်သုံးနှစ်သာ အပြစ်ပေးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထောင်မှလွတ်သောအခါ မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းတောင်ခြေကို အခြေပြုလျက် မိုးပြာခြံကိုတည်ထောင်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ဖြင့် သာသနာပ၀ါဒများကို ဖြန့်ချိဟောကြားခဲ့သည်။ ဓမ္မပါမောက္ခ၀တ်စုံဟု အမည်ပေးကာ မိုးပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီအပွတို့ကို ၀တ်ဆင်ခဲ့သည်။ အနုပါဒါယဉ်ကျေးမှုဌာနဟူ၍ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒအယူအဆများကို စာပေး၊ စာယူပုံစံဖြင့် သင်ကြား ပို့ချခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင်ထေရ၀ါဒသာသနာတော်အတွင်းမှသံဃာဂိုဏ်းသီးသန့်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရသည်။
ပညာရှင်အင်အား၊ ဘာသာဝင်အင်အား၊ ငွေကြေးအင်အား၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိရေးအင်အား အကြီးမားဆုံး၊ အခိုင်မာဆုံး အဓမ္မ၀ါဒီဂိုဏ်းကြီးဖြစ် ငွေရတုပူဇော်ပွဲစာအုပ်ကို သေချာလေ့လာကြည့်လျှင် အလွန်ပင်ထင်ရှားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပညာတတ်အမည်ခံ ဦးဥာဏိန္ဒာလင်္ကာရ၊ ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ၊
ဦးစိုးအောင် (သ-စ-အ ဓမ္မာစရိယ၊ သုတေသနကျမ်းပြုဌာနမှူးဟောင်း) စသည်များအပြင် စာရေးတတ်သူ၊ဟောပြောတတ်သူအများအပြားရှိနေကြသည်။အခြေခံသင်တန်းများရော၊ ဓမ္မ၀ိဟာရီသင်တန်းများပါ ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ ဓမ္မ၀ိဟာရီသင်တန်းတို့တွင် အာသ၀က္ခယ ၀ိဟာရီစာတမ်း ပြုစုကြရကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ ဓမ္မဆရာ ဦးရန်အောင်၏ ဟောပြော ချက်များအရ သြဠာရိက+သုခမ တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်များ အုပ်စုလိုက်ကြီးပင် ထိုဂိုဏ်းသားများ ဖြစ်ကြကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ အင်းဝဘဏ်မှ ဦးရင်စိန်ကဲ့သို့သော သူများကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဦးမြင့်ဝင်းမောင် (အေဇက်စာပေအိမ်) ကဲ့သို့ ပုံနှိပ်တိုက်ပိုင်ရှင် ကျွမ်းကျင်သူ များကြောင့်လည်းကောင်း၊ စာအုပ်အများအပြား ထုတ်ဝေနိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသသည် စာအုပ်များစွာတို့ကို ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေလျက် နေရာများစွာသို့ သွားရောက်ပေးဝေ စည်းရုံးနေကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကျောင်းသားအဖြစ် နေထိုင်လျက် ၀ါဒဖြန့်နေသူ ဦးကုမာရာလင်္ကာရလို နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဦးÓဏကိုယ်တိုင်ကပင် ၀ိဟာရီအမည်ခံလျက် အင်တာနက် အသုံးပြုဟောပြောချက်၊ ဆွေးနွေးချက်တို့ကို ပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း တစ်ဘ၀သာရှိသည့် ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်ဝါဒီ ရှင်ဗုဒ္ဓဒတ္တလို ထိုင်းဘုန်းကြီးများရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အင်တာနက်အားဖြင့်လည်း ကမ္ဘာသို့တိုင်အောင် ပေါက်ရောက်ကျယ်ပြန့် လျက်ရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။ စင်္ကာပူဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားသောဂိုဏ်းဖြစ်၍ စင်္ကာပူနေ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများက မှာယူသဖြင့် ပေးပို့ ရောင်းချသည့်စာအုပ်များမှာ များပြားလှကြောင်း သိရပါသည်။ အရိယဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေကဲ့သို့သော ရန်ပုံငွေများလည်း အလှူခံလေ့ရှိခြင်းကြောင့် အလွန်တိုးတက်ကြီးထွားနေကြောင်း သိရပါသည်။ ထို့ပြင် လစဉ်ထုတ်ပေးစာများကို ရောင်းချသည့်ဝင်ငွေများနှင့် အခွန်လွတ်ထုတ်ဝေထားသည့် စာအုပ်ကြီးတို့ကို တစ်အုပ်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ရောင်းချသည့်အတွက် ဂိုဏ်းဝင်များထံမှ ရောင်းရငွေများကြောင့် အလွန်စည်ကားနေကြောင်း သိရသည်။ လွတ်လပ်တဲ့လူတစ်အုပ်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၊ ငွေရတုပူဇာတစ်အုပ်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၊ သင်တန်းခွေတစ်စုံလျှင် ကျပ် ၅၀၀၀ စသည်)။ ဤသို့ဖြစ်နေသည့် အင်အားများကြောင့် ၎င်းအဓမ္မ၀ါဒီဂိုဏ်းကြီးသည် အခိုင်မာဆုံး၊ အင်အားအကြီးဆုံး အဓမ္မ၀ါဒီဂိုဏ်းကြီး ဖြစ်နေရပေသည်။
မှတ်ချက်။ ။အီးမေးလ်မှ တဆင့်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော်အနေနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်လို့ သာမန်မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် မည်သူမှန်တယ် မှားတယ်ကို ဝေဖန်နိုင်တဲ့အဆင့်မဟုတ်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူများ မိမိဖာသာချင့်ချိန်စဉ်စားတော်မူကြပါခင်ဗျာ။
တဆင့်ပေးပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ငယ်လေးမ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:53 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 4:13 AM0comments Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook